Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Muxuu Ku Muteystay Abaalmarinta Nabadda? – Xeernews24
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Dr,Abiy Axmed ayaa ku guuleystay billadda abaalmarinta nabadda, sida uu shacaiyaya guddiga bixiya abaalmarintaasi oo fadhigiisu yahay dalka Norway.
Heshiskii nabadeed ay wada gaadheen Itoobiya iyo Eritrea ayaa lagu soo afjaray dagaalkii 20-ka sanno socday oo u dhexeeyay labada dal.
Tan iyo inta uu hoggaanka dalka Itoobiya uu qabtay Ra’isal wasaare Dr Abiy Axmed oo ay haatan hal sanno u buuxsantay waxaa dalka Itoobiya ka socday isbeddello dhinacya badan taabanaya.
Kumanaan maxaabiis ah ayuu sii daayay oo u badnaa mucaarad. Kuwa kale oo dibad joog ahaa ayaa dalka dib ugu soo labatay. Wuxuu soo afjaray collaadii muddo 20 sanno ah dalkiisa kala dhexeysay Eretria.
Ra’isal wasaaraha mar uu arrintaasi ka hadlayey waxaa uu yidhi “Sarreynta sharciga howla aad u badan ayaa noo qabsoomay inkasta oo ay jiraan arrima qaarkood oo u baahan wakhti badan in la geliyo balse aanu billaawnay”
“Deegaanka Soomaalidana maanta wuxuu ka mid yahay deegaannada ugu deggan marka loo fiiriyo sidi hore uu ahaan jiray. Taasina waxay ka mid tahay tallaabbooyinka aan qaadnay si buuxdana ugu guuleysannay sanadkii hore” ayuu yidhi Ra’isal Wasaare Dr Abiy Axmed.
DR Abiy Axmed mar uu ka hadlayey iskudhacyada qomiyadaha dalka Itoobiya ee sii badanaya waxaa uu sheegay iney dad gaadhaya 3 milyan oo qof ay ku barakaceen colaado qowmiyadaha ka dhex dhacay.
Halkii sanno ee aan xilka soo hayey 1.5 milyan ku dhawaad ayaa deegaannadooda ka qaxday halka 1.5 milyan ee harayna ay xerooyin ku sii jireen xilliga xilka la ii magacaabay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/abiy.jpg 363 648 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-12 09:40:382019-10-12 09:40:38Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Muxuu Ku Muteystay Abaalmarinta Nabadda?
Dagaalkii Foolka-Foolka markii lagu kala Calaf qaaday Maamulkii Canfarta oo... Kumaan Liyuu Boolise ah Oo Qalin Jabiyey Xili dhigooga Canfartu gumaad ku wado...